Amerika Avaratra · Novambra, 2012 · Global Voices teny Malagasy
Amerika Avaratra · Novambra, 2012
Tantara mikasika ny Amerika Avaratra tamin'ny Novambra, 2012
Arzantina 21 Novambra 2012
Ny Initiative for Freedom of Expression on Internet (iLEI, ho an'ny anarana Espaniola niaviany), fandaharanasa manokana an'ny Foibe Fandinihana ny Fahalalahana Maneho Hevitra sy ny Fidirana Hahazo Vaovao ao amin'ny Anjerimanontolon'i Palermo ao Arzantina, dia manana asa vaovao ibanjinany ny fifandraisana misy eo amin'ny fahalalahana maneho hevitra, ny anaran-tsehatra, ary ireo karazany maro samihafa noraisin'ny firenen-tsamihafa hitantanana azy ireny.
Etazonia 14 Novambra 2012
Etazonia 13 Novambra 2012
Etazonia 10 Novambra 2012
anaraka akaiky ny fifidianana tany Etazonia ny mpiserasera Isiraelianina, maro tamin'izy ireo no niari-tory mandra-maraina hahitany hoe iza tamin'ny kandidà no nahahoatra ny isan'ny mpifidy lehibe 270 nilaina. Maro an'isa ny Isiraeliana ao amin'ny tambajotra an-tserasera sy ny tontolon'ny bilaogy no manana fironana ankavia ka manantena indray ny hahavoafidy an'i Obama
Etazonia 09 Novambra 2012
Taorian'ny fifaninanana ho filoham-pirenena mafanavay , hotantanan'i Barack Obama mandritra ny efa-taona manaraka indray ny ho avin'i Etazonia. Mbola ny Twitter ihany no ahafahana mitsapa hafanana ny fihetsesham-po nandritra ny fifidianana.
Afrika Mainty 08 Novambra 2012
Raha voafidy indray Barack Obama hitondra mandritra ny efa-taona any Etazonia, Afrika kosa dia manao tombana ny efa-taona nitondràny Amerika sahirana kokoa amin'ny olana ara-toekarena noho ny fifandraisana ivelany, indrindra ny fifandraisana amin'ny kaontinanta afrikana. Lehibe tokoa ny fanantenan'ireo afrikana, nefa maro no mieritreritra fa hahafahan'ny Filoha Obama mandinika lalindalina kokoa momba ny olana afrikana ny fe-potoam-piasàna faharoa azony.